အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား (၅) | ABC Radio Australia
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား (၅)
Lesson 8 of 14ပြောင်းရန်
မြန်မာ ​​ဘာသာမှာ ​​ရှေ့နောက် ​​ပြောင်းပြန် ​​ပြောလို့မရတဲ့ ​​စကားလုံးတွေ ​​ရှိသလို ​​အင်္ဂလိပ်မှာလည်း ​​ရှိပါတယ်။ ​​ဥပမာ ​​မြန်မာမှာ ​​ရှင်ရေး၊ ​​သေရေး ​​လို့ ​​ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ​​ဒါကြောင့် ​​အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်း ​​ပြောင်းပြန် ​​ပြောလို့မရတဲ့ ​​စကားလုံး ​​တချို့ရှိတဲ့အတွက် ​​အဲဒီ ​​စကားလုံးတွေကို ​​တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - Flickr (Credit: ABC Licensed)
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ​​Bhanuteja ​​Reddy ​​က ​​'abscond' ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကို ​​မေးလာပါတယ်။ ​​
‘Abscond’ ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်က ​​'တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ​​အလျင်အမြန် ​​ထွက်ခွာတာမျိုး' ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးရန် ​​တစ်ခုခု ​​ကနေ ​​လွတ်မြောက်အောင် ​​ကြိုးစားတဲ့အခါ ​​မျိုးမှာ ​​အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​The ​​suspect ​​absconded ​​before ​​police ​​could ​​arrest ​​him. ​​လို့ပြောရင် ​​'ရဲတွေက ​​သံသယရှိနေတဲ့လူကို ​​မဖမ်းဆီးနိုင်ခင် ​​အဲဒီလူက ​​ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် ​​သွားတယ်' ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဥပမာ ​​တစ်ခုကတော့ ​​The ​​two ​​girls ​​absconded ​​from ​​school ​​at ​​lunch ​​time. ​​လို့ပြောရင် ​​'နေ့လည်စာ ​​စားချိန်မှာ ​​ကျောင်းသူမလေး ​​နှစ်ယောက် ​​ကျောင်းကနေ ​​လစ်ပြေးသွားတယ်' ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယ ​​နိုင်ငံက ​​Shahala ​​Kp ​​ကလည်း ​​အခုလို ​​မေးထားပါတယ်။
What ​​is ​​the ​​difference ​​between ​​'likely ​​to' ​​and ​​'may'?
'likely' ​​နဲ့ ​​'may' ​​တို့ရဲ့ ​​ကွဲပြားမှုကို ​​မေးမြန်းထားတာပါ။
နှစ်ခု ​​စလုံးက' ​​ဖြစ်နိုင်ခြေ ​​ရှိတယ်၊ ​​မသေချာ ​​မရေရာ' ​​တဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ် ​​ရှိပေမယ့် ​​'likely' ​​ကတော့ ​​"may" ​​ထက် ​​ပိုပြီးတော့ ​​ဖြစ်နိုင်ခြေ ​​များတဲ့ ​​အနေအထားရှိပါတယ်။
It ​​was ​​quite ​​likely ​​the ​​first ​​time ​​they ​​had ​​seen ​​a ​​double ​​rainbow ​​in ​​the ​​valley.
ဒီချိုင့်ဝှမ်းမှာ ​​သက်တန့် ​​နှစ်ခု ​​ပေါ်နေတာကို ​​သူတို့အခုမှ ​​မထမဆုံး ​​အကြိမ် ​​မြင်ဖူးဟန်ပေါက်ပါတယ်။ ​​
He ​​may ​​go ​​to ​​university ​​but ​​he’s ​​likely ​​to ​​continue ​​at ​​his ​​current ​​college.
သူတက္ကသိုလ်တက်မယ့် ​​အနေအထားတော့ရှိပါတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ ​​လက်ရှိတက်နေတဲ့ ​​ကောလိပ်ကျောင်းမှာပဲ ​​ကျောင်းဆက်တက်ဖို့က ​​ပိုများတယ်။
'May' ​​ကတော့ ​​ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ​​ပိုနည်းတဲ့ ​​အခါမျိုးမှာ ​​သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
She ​​may ​​arrive ​​tonight ​​or ​​tomorrow, ​​I ​​am ​​not ​​sure.
သူမ ​​ဒီည ​​ဒါမှမဟုတ် ​​မနက်ဖြန်မှာ ​​ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ​​ကျနော် ​​သေခြာ ​​မသိဘူး။
ပါကစ္စတန် ​​နိုင်ငံက ​​Anuj ​​Kumar ​​ကလည်း ​​'after' ​​နဲ့ ​​'later' ​​တို့ရဲ့ ​​ကွဲပြားခြားနားမှုကို ​​မေးထားပါတယ်။
'Later' ​​ဆိုတာ ​​နာမဝိသေသန ​​ဖြစ်ပြီး ​​တခုခု ​​ပြုလုပ်ပြီးနောက် ​​ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ ​​ကိစ္စတွေကို ​​ရည်ညွန်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာ ​​အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​​'မကြာခင်' ​​လို့ ​​ပြောနိုင်ပါတယ်။
He ​​is ​​going ​​to ​​catch ​​a ​​later ​​train.
သူနောက် ​​ရထားတစ်စီးနဲ့ ​​လိုက်တော့မယ်။ ​​
‘Later’ ​​ကို ​​ကြိယာဝိသေသန ​​အနေနဲ့လည်း ​​အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ​​
He ​​will ​​be ​​back ​​later.
'After' ​​ကတော့ ​​တခုပြီးမှ ​​တခု ​​ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ​​အခါမှာ ​​သုံးလေ့ရှိပြီး ​​ကြိယာဝိသေသနလည်း ​​ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
He ​​arrived ​​at ​​noon ​​and ​​his ​​sister ​​arrived ​​soon ​​after.
သူကတော့ ​​နေ့လည်ပိုင်းမှာရောက်လာပြီးတော့ ​​သူအစ်မကတော့ ​​အဲဒီနောက်ပိုင်း ​​မကြာခင်မှာပဲ ​​ရောက်လာတယ်။
Shall ​​we ​​go ​​for ​​a ​​swim ​​after ​​lunch?
နေ့လည်စာ ​​စားပြီးတော့ ​​ရေကူးသွားကြမလား။
Three ​​months ​​after ​​they ​​left ​​Australia ​​they ​​settled ​​in ​​the ​​UK.
သြစတြေးလျနိုင်ငံကနေ ​​ထွက်ခွာလာတာ ​​သုံးလပြည့်တဲ့နောက်မှပဲ ​​သူတို့ ​​ယူကေ ​​(ဗြိတိန်) ​​မှာ ​​အခြေချနေနိုင်တော့တယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ​​Doc ​​Tahira ​​ကတော့ ​​'live ​​it ​​up' ​​နဲ့ ​​'back ​​out' ​​တို့ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကို ​​မေးလာပါတယ်။
‘To ​​‘back ​​out’ ​​လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ ​​ပေးထားတဲ့ ​​ကတိ ​​တွေကို ​​ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ​​နောက်ဆုတ်ခြင်း ​​ဖြစ်ပါတယ်။
We ​​planned ​​to ​​buy ​​a ​​farm ​​but ​​my ​​partner ​​backed ​​out ​​at ​​the ​​last ​​minute.
ကျနော်တို့ ​​ခြံတစ်ခြံဝယ်ဖို့ ​​စီစဉ်ခဲ့တယ် ​​ဒါပေမဲ့ ​​ဝယ်ခါနီးကြမှပဲ ​​ကျနော့်ဇနီးက ​​မဝယ်တော့ဖို့ ​​ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ​​
I ​​had ​​already ​​signed ​​the ​​papers ​​so ​​it ​​was ​​too ​​late ​​to ​​back ​​out.
ကျနော် ​​လက်မှတ်တောင် ​​ထိုးပြီးသွားပြီ ​​အဲဒီတော့ ​​နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ ​​မရတော့ဘူး။ ​​
Be ​​careful ​​when ​​you ​​back ​​out, ​​I’m ​​parked ​​right ​​near ​​you.
ကားနောက်ဆုတ်ရင် ​​သတိထားဆုတ်ပါနော်၊ ​​ကျနော့်ကားကို ​​ခင်ဗျားကားအနားမှာ ​​ရပ်ထားခဲ့တယ်။
To ​​‘live ​​it ​​up’ ​​ကတော့ ​​တွေးပူမနေပဲ ​​ပျော်ပျော်နေတတ်ခြင်း ​​ဖြစ်ပါတယ်။
He ​​spent ​​a ​​month ​​living ​​it ​​up, ​​wearing ​​expensive ​​clothes ​​and ​​attending ​​parties ​​every ​​night.
သူကတော့ ​​ဈေးကြီးတဲ့ ​​အထည်တွေ ​​ဝတ်၊ ​​ပါတီပွဲတွေ ​​ညတိုင်းတက်ပြီး ​​တစ်လလောက်ကို ​​ပျော်ပျော်လေးနေခဲ့တယ်။ ​​
We ​​decided ​​to ​​go ​​out ​​and ​​live ​​it ​​up ​​on ​​our ​​last ​​night ​​in ​​town.
ဒီမြို့မှာ ​​နောက်ဆုံးနေရမယ့် ​​ညဖြစ်တဲ့အတွက် ​​ကျနော်တို့ ​​အပြင်ထွက်ပြီး ​​ပျော်ပျော်ပဲ ​​နေဖို့ ​​ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ​​Albren ​​Solomon ​​Mamades ​​ibrahim ​​ကတော့ ​​'so' ​​ဆိုတဲ့ ​​စကားလုံးကို ​​ဆက်စပ် ​​စကားလုံးအနေနဲ့ ​​သုံးလို့ရပါသလား ​​လို့ ​​မေးလာပါတယ်။
'so' ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​​ဒါကြောင့်၊ ​​အဲဒါကြောင်း၊ ​​အဲဒီအတွက်ကြောင့် ​​ပဲ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
I ​​felt ​​really ​​bad ​​about ​​what ​​I ​​said ​​so ​​I ​​bought ​​you ​​this ​​gift.
ကျမ ​​ပြောခဲ့မိတဲ့ ​​စကားတွေအတွက် ​​စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းတဲ့အတွက် ​​ရှင့်အတွက် ​​ဒီလက်ဆောင်လေး ​​ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။ ​​
I ​​couldn't ​​see ​​him ​​on ​​Friday ​​so ​​we’re ​​meeting ​​next ​​week.
ဒီလာမယ့် ​​သောကြာနေ့မှာ ​​သူ့ကို ​​လိုက်မပို့နိုင်တဲ့အတွက် ​​ဒီတပါတ်အတွင်းမှာပဲ ​​တွေ့ဖို့ ​​စီစဉ်လိုက်တယ်။ ​​
'so' ​​ဆိုတဲ့ ​​စကားလုံးက ​​'ဒါဆို' ​​'အဲဒီတော့" ​​ဆိုတဲ့ ​​မြန်မာစကားလုံးနဲ့လည်း ​​ဆင်တူပါတယ်။
So ​​did ​​she ​​like ​​the ​​present?
အဲဒီတော့ ​​အဲဒီလက်ဆောင်ကို ​​သူကြိုက်ရဲ့လား။ ​​
So ​​are ​​we ​​still ​​meeting ​​for ​​lunch ​​today?
အဲဒီတော့ ​​ဒီနေ့ ​​နေ့လည်စာစားချိန်မှာ ​​တွေ့ကြဦးမလား။ 